होमपेज / कला / फिल्म समीक्षा / युद्धविरोधी कथा 'उमा'
युद्धविरोधी कथा 'उमा'	27 May 2013 | 10:41am सोमबार १३ जेष्ठ, २०७०
नेपाली फिल्ममा दुई धारको बहस निकै चल्यो। निर्माताहरु 'मूलधार'का फिल्म बनाउँथे। सूत्रवद्ध र मसलायुक्त फिल्म मूलधारमा दर्ता हुन्थ्यो। विचारकहरु 'वैकल्पिक धार'को वकालत गर्थे। सूत्र र मसलामुक्त भए वैकल्पिक धारको मान्यता दिइन्थ्यो। तर, यस्ता फिल्म बनाउन तम्सिनेको संख्या अत्यन्त थोरै रह्यो। किनभने 'मूलधार'को बनाए पैसा उठ्थ्यो। फिल्म: उमा
रेटिङ: निर्देशक: छिरिङरितार शेर्पा
उद्योगको अनुहार फेरिँदै गएको छ। वैकल्पिक धारबाट प्रेरित फिल्मकर्मी मौलाएको देखिन्छ। तर, बजार राम्रो भएकोले होइन, मूलधारले पनि पैसा उठाउन छोडेकोले। पैसा नभए 'प्रशंसा'को आशमा फिल्मलाई यथार्थसँग नजिक बनाउने प्रयास हुँदै आएको छ। यसमा फिल्म पढेका युवापुस्ता बढी सक्रिय छन्। उद्योगमा दुई धारका 'अतिवादी'को छुट्टाछुट्टै पंक्ति बनिरहेका बेला डकुमेन्ट्रीमा गहकिलो चिनारी बनाएका छिरिङरितार शेर्पाको कथानक फिल्म 'उमा'ले दर्शकको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 'मुकुण्डो'जस्तो 'आर्ट फिल्म' बनाएका शेर्पाले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको पृष्ठभूमिमा साधारण फिल्म बनाएका छन्, सबैलाई छुने। दुवै धारका हिमायतीले 'आफ्नो' दाबी गर्न मिल्ने। 'फिल्ममा कला छाँट्ने कि भावना पोख्ने?' भन्ने बहसबीच उनले भावनालाई कलात्मक ढंगले पेश गर्ने लोकप्रिय बाटो अपनाएका छन्।
तथापि 'हरेक सटले एउटा कथा भन्न सक्नुपर्ने' चुनौतीलाई शेर्पाले अधिकांश ठाउँमा पूरा गराएका छन्। 'कास्टिङ'लाई समेत उनले कलाकार चिनाउन मात्र नभएर दर्शकलाई फिल्मको सन्दर्भ बुझाउन र द्वन्द्वबाट प्रभावित फिल्म हेर्न तयार बनाउने काममा प्रयोग गरेका छन्। आम नेपाली 'फर्मुला फिल्म'मा जे चिजको प्रयोग सावधानी र स्वाभाविक रुपमा भएको छैन त्यो 'उमा'मा छ। युद्धमाथि बनेको फिल्म भए पनि यो युद्धविरोधी छ। « भोको पेटको अघाउने कथा : अन्तराल (फिल्म समीक्षा)
इन्जिन खटारा, डेन्टपेन्ट नयाँ »
त्यागी सन्त प्रपन्नाचार्य बादलपारिको फिल्म र राहत सत्ता-सम्झौताको मार गुणस्तरीय शिक्षाका तगारा पुनर्निर्माण चुनौती: गाउँसहर कस्तो बनाउने? प्रतिक्रिया